Denye ụdị ngwaahịa niile
AVR, UPS, Inverter na Transformers zuru oke
Onye ndu teknụzụ
Ihe karịrị 20 mbụ mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ n'ụwa nile maka ike na ngwaahịa
Na-ere ihe karịrị mba 60 & mpaghara, nke ndị ama ama kwadoro
Top 5 ọkwa
Ndị nrụpụta 5 kacha elu nke ngwaahịa AVR na China ndị ọrụ 350, mpaghara mmepụta 40,000 kwadebere nke ọma
Egosiputa Ogo & nzipu
Company ISO9001: 2015 & IMPS GB / T29490-2013 gbaara usoro na njikwa siri ike
Staba Electric Co., Ltd. Okwuchi. guzobere na 2010, nke dị na Zhongshan, China-ebe njem nke Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area. Staba bụ onye na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ ahụ ma bụrụkwa onye a ma ama nke ụwa OEM nke ihe ngwọta eletriki & eletriki. Ngwaahịa anyị bụ Automatic Voltaji Stabilizers (AVR), Uninterruptible Power አቅርቦት (UPS), Inverters / Solar Inverters, Small & Medium-Sized Brushless DC Motors, modul njikwa nke BLDC motors, wdg.
Staba nwere 43,000 sqm nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ wuru onwe ya, yana ụzọ dị mkpa nke ụlọ ọrụ mmepụta:
- Ngwongwo ihe eji eme ihe na ihe omuma,
- Ntanetị iron isi reeling na annealing ogbako,
- Transformer asọfe & ule omumuihe,
- Nhazi na ule nyocha PCB,
- BLDC moto ogbako,
- Power ọkọnọ ngwaahịa ikpeazụ nzukọ & ule omumuihe.
Kwa afọ mmepụta esịmde 50 nde PC. Anyị na ngwaahịa na-ere ihe karịrị mba 68 na mpaghara gburugburu ụwa Ọtụtụ n'ime anyị isi ahịa bụ ụwa na-ama ụdị. N’afọ 2019, ahọpụtara Staba dị ka ihe nlere anya na Index Onye Ndú Onye Nduzi.
N'oge mmepe ahụ, Staba na-elebara nnukwu akụ anya nke ikike ọgụgụ isi na nhazi usoro njikwa ụlọ ọrụ. Staba bụ ụlọ ọrụ izizi na mpaghara anyị iji nyefee nzere nke IPMS nke GB / T29490-2013, nwere ikikere ikike izizi mbụ nke 4 na United States na European Union, yana ihe karịrị 58 mbụ ihe ntinye akwụkwọ China na ihe eji achọpụta ihe. Kemgbe 2014, a kwadoro / re-Staba dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke mba maka ugboro atọ ugboro abụọ ， anyị nwere ụlọ ọrụ teknụzụ ụlọ ọrụ abụọ: Guangdong Province Intelligent Power Engineering Technology Center, na Zhongshan Power Product Engineering Technology Center. Site na ụbọchị izizi nke ntọala ya, etinyere sistemu ngwanrọ ERP na sistemụ njikwa ISO9001 n'akụkụ ọ bụla nke njikwa ụlọ ọrụ, na-eme ka arụmọrụ nke sistem na-aga nke ọma. Ugbu a, anyị nwere ndị ọrụ 340, nke 33 bụ maka usoro R & D na 38 bụ maka usoro njikwa ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, anyị nwere nkwado siri ike na mmekọrịta mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, na-anwa ịme ngwaahịa, ọrụ, na teknụzụ anyị na mbido ụlọ ọrụ ahụ.
Staba bụ ụlọ ọrụ bara uru, nke ụkpụrụ ya dị oke arụmọrụ, ihe ọhụrụ, na ndị ahịa. Ọ bụ kpọmkwem n'ihi oke arụmọrụ Staba nwere ike nweta ụgwọ ọrụ dị elu karịa ndị ọgbọ ya ka e wee nwee ike itinyekwu akụ na uru na R&D nke mere na echekwara uru Staba nwere ka ọ dịrị; Innovation bu nlekọta mmadu, ihe mmuta ohuru nke Staba na-abia site n'inyere ndi nketa aka otu esi echekwa ihe ndi ozo ma nwee obi uto n'ime usoro nke imeputa - mmeputa - uzo - nkwurita uka n'etiti ndi ahia; ndị ahịa na-egosipụta omume Staba maka ọrụ na ọnọdụ ọrụ ọrụ na usoro niile.
Naanị nye anyị echiche banyere njikwa moto na moto, anyị ga-enye gị usoro zuru ezu nke ngwọta na igwe zuru oke ịchọrọ. Na-atụ anya iso gị rụkọọ ọrụ!
Bido dị ka obere ụlọ ọrụ, gbado anya na Voltaji Stabilizer & UPS
Naanị ihe nkwuputa nke Pepsi Cola maka Voltapaji
Ihe omumu ohuru nke 8,000 m² Gafere ISO9001 gbaara oru bido ulo oru 1st 1st tara ezigbo aja ugwu Voltaji Stabilizer
Granded China National Hi-tech Enterprise gbaara
Ejiri dị ka China Top 5 na-emepụta Voltaji Stabilizer
Ulo oru nke Triac ụdị voltaji stabilizer
Malite iwu ogige ulo oru 40,000m²
Nyere Guangdong New Intelligent Power Engineering Technology Center
Etinyere Staba Industrial Park okpukpu abụọ, ikike nrụpụta ji okpukpu abụọ.
Akara ikike ikike ikike amamihe amamihe GB / T29490- 2013 gbaara
Staba BLDC Motor Division guzobere
PCBA & Small Household Appliances Solution company malitere
Moto, Agụụ Cleaner, BLDC Fan Motor, BLDC Igwe, Brushless DC Motor, Igwe Brushless, ase maka pricelist